'यस कारण यो शेयर बेच्ने समय होइन,प्यानिक सेल नगरौँ'
सिन्धुली घर भई काठमाडौं बस्दै आएकी सीमा निरौला हतासमा छिन् । दुई वर्षसम्म शेयर नबेच्ने भनेर लगानी गरे पनि लकडाउन भयो भने शेयरमूल्य घटेर नाफा लिन नसक्ने भन्दै शेयर बेच्न लागिपरिरहेकी छिन् । अझ आइतबार नै कारोबार सुरु भएको ३५ मिनेटमै नेप्से सूचक ४८ अंकले घटेर सबै कम्पनीको शेयरमूल्य ओरालो लागेपछि उनले अत्तालिँदै आफूसँग भएको शेयर पनि बिक्रीमा राखिन् ।
‘अब लकडाउन हुन्छ, आजसम्म राम्रो बढेको शेयर भोलि घट्न सक्छ भनेर हल्ला सुनेँ, बरु अहिले नै नाफा बुक गरेर बाहिरिन्छु,’ उनी भन्छिन् । नाफा बुक गर्ने चक्करमा राम्रो कम्पनीको शेयर बेचेको बताउँदै उनी लाभांशभन्दा कहरमा पैसा बचत नै उत्तम रहेको बताउँछिन् ।
उनी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै अधिकांश लगानीकर्ता शेयर बेचेर पैसाको जोहो गर्नतर्फ लागेका छन् । कतिपय भने सामाजिक सञ्जालमा लकडाउन हुनसाथै शेयरमूल्य घट्छ भन्ने हल्लाको पछाडि लागेरै शेयर बेच्न लालायित भेटिन्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण आइतबारको कारोबारलाई पनि लिन सकिन्छ । आज प्यानिक सेल गर्नेहरू बढी देखिएका छन् भने केही दिनअघि पनि प्यानिक सेलकै कारण बजार घटेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यस कारण डराउनु पर्दैन
शेयरबजारमा घट्ने बढ्ने भइनै रहन्छ । यो विशेषता नै हो । अब लकडाउन हुन्छ अनि शेयरमा त्यसको असर देखिन्छ र शेयर घट्छ भनेर प्यानिक हुनुपर्ने आवश्यकता भने छैन ।
शेयरबजार विश्लेषक मुनकर्मी भन्छन्, ‘अनलाइन प्रणालीमा गइसकेका छौँ, गतसालको जस्तो अहिले बन्द हुने अवस्था छैन । अनि किन डराउने ?’ मुनकर्मी अनलाइन प्रणालीको विकासले भविष्यमा लकडाउन नै भए पनि मार्केट अपरेसनमा कुनै असर नगर्ने बताउँछन् । त्यसो त अहिले बजारका जानकारहरू पनि सम्भावित लकडाउनलाई लिएर नआत्तालिन आग्रह गर्छन् । टेक्निकल समस्या नहुने हुँँदा घरमै बसेर कारोबार गर्दा कोरोनाको असर बजारमा खासै नपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यतिबेला शेयरबजार राताम्मे बन्नुमा दुईवटा कारण नै प्रमुख छन् । एक सम्भावित लकडाउनको नाममा प्यानिक सेल गर्ने लगानीकर्ता बढ्नु र अर्को लामो समयसम्म बढेको बजारबाट नाफा बुक गर्नु ।
यी दुई प्रकारका लगानीकर्ता एकै पटक हाबी हुँदा त्यसको असर शेयरबजारमा परेको छ । लगानीकर्ता हरि ढकाल नयाँ लगानीकर्ता हल्लाका भरमा लागेर राम्रा कम्पनीहरूको शेयर पनि बेच्न उत्रिँदा शेयर सप्लाई बढेको बताउँछन् ।
त्यस्तै, लकडाउनमा पैसाको जोहो गर्न पनि केही लगानीकर्ताले धमाधम आफूसँग रहेको शेयर बेच्ने गरेको र किन्ने योजनामा रहेका पनि पैसा बचाउन लाग्दा सप्लाईअनुसार डिमाण्ड बढेको छैन । यसले गर्दा बजार घट्दो क्रममा छ ।
अर्की लगानीकर्ता संरक्षणा चौधरी पनि उद्योगधन्दा बन्द हुँदा बजारमा तरलता बढ्ने र लगानी गर्ने प्रमुख स्थान शेयर मार्केट हुने हुँदा नेप्से अझै बढेर जाने बताउँछन् ।
इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार पनि प्यानिक सेल नगर्न आग्रह गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तेस्रो त्रैमासको रिपोर्ट राम्रो आएको छ । यस कारण सबैले राम्रै लाभांश दिन्छन् । अनलाइनमा गइसकेपछि किन्न बेच्न ब्रोकरकोमा पुग्नु पर्दैन । अनि कसरी असर पर्छ ?’
अध्यक्ष रौनियार लाभांशका लागि तीन महिना मात्रै समय बाँकी रहँदा शेयर बेच्नुभन्दा पनि किन्ने उचित समय भएको बताउँछन् ।
शेयर किन नबेच्ने ?
शेयरबजार विश्लेषक, लगानीकर्ता र जानकारहरूले अहिले शेयर बेच्नेभन्दा पनि किन्ने समय भएको बताएका छन् ।
यस्ता छन् नबेच्नुपर्ने कारणहरू:
१. शेयरबजार पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको छ । गत वर्षजस्तो लकडाउन भएसँगै मार्केट बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यसर्थ मार्केट बन्द हुँदैन ।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो तेस्रो त्रैमासिक विवरण पेस गरिसकेका छन् । अधिकांशको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नै छ । लगानीकर्तालाई राम्रै लाभांश दिन सक्ने क्षमता छ ।
३. आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी छ । एक वर्ष होल्ड गरेको शेयरको लाभांश पाउने बेलामा बेच्नु भनेको मूर्खता नै हो । सकिन्छ भने राम्रा कम्पनी छानेर किन्ने कोसिस गरौँ
४. लकडाउन भयो भने उद्योगधन्दा कलकारखाना सबै बन्द हुन्छ । खर्च घटेसँगै बजारमा स्वतः तलरता बढ्छ । लगानी गर्ने ठाउँ संकुचन भएसँगै शेयरबजारमा लगानी बढ्ने सम्भावाना छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १२, २०७८, १५:४३:००